Taasina waa sababta ay dadku u leeyihiin meelo yaryar oo u dhaw dhegahooda - CAYMISKA CAAFIMAADKA MAGAALADA - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » QODOBO Tani waa sababta ay dadka qaarkiis u leeyihiin godad yar oo dhegahooda u dhow - SANTE PLUS MAG
Welcome / Medecine / Maladies /
Taasina waa sababta ay dadku u leeyihiin meelo yar oo dhegaha u dhow
Jidhku waa qarsoodi mararka qaarkood naga tago hadal la'aan. Xaaladaha qaarkood waxay u muuqdaan kuwo la yaab leh, laakiin dhammaantood waxay leeyihiin sharaxaad cilmiyeed. Weligaa ma waxaad la kulantay qof leh god yar oo u dhaw dhegta ama labadaba? Caafimaadka wuxuu na siinayaa sharaxaad ku saabsan bukaan-ba'an macquul ah si aad u hesho qof shaqsi ah.
Maya, ma ahan wax ciriiri ah!
Dadka qaarkood waxay ku dhashaan godad yar oo u dhaw dhegaha. Weligaa ma kulantay? Haddii ay sidaas tahay, oo aadan ku dhicin inaad weydiiso, waxaan kuu sharxi doonaa waxa uu yahay. Waa dhacdo naadir ah oo nasiib-darro nagu soo celinaysa midnimada qof kasta. Tani waa sinus-ka-baxa hore ee auricular, oo ah calaamado hiddesid ah oo hufan oo saameyn ku yeelan kara oo kaliya tiro yar oo dad ah. sida laga soo xigtay Maxiscienceswaxaa jira sharaxaad cilmi baaris ah oo ku saabsan dhacdadan jidhka ah ee aan caadi ahayn. Dildilaaca yar ee u dhow kilyaha ayaa qaadi kara cudurka laakiin waxaa laga saari karaa qalliin. Waxay ka timaadaa dhismaha embriyaha ee uurjiifka. Astonishing, maya?
Dhegahayagu waxay inoo adeegaan si ay u arkaan dhawaaqyada iyo inay abuuraan qaab Meelaha yaryar ee hareeraha dhegaha dadka qaar ayaa loo isticmaalaa in lagu xiro maskaxda. Badanaa, daloolkaan ayaa kaliya ku jira hal dheg. Waxay ku dhici kartaa in laga helo labada dhegood laakiin waxay ku jirtaa dhacdo aad u yar. Jidhku waa mid xiiso leh oo mid kasta oo ka mid ah waa mid gaar ah oo leh isirro gaar ah oo waxyeelleyn kara.
Qalabka hore ee auricular
Tan waxaa la yiraahdaa sinuska hore ee auricular. Inta badan kiisaska, daloolkan waxaa ku yaal kaliya hal dheg. Waxaa la sameeyaa inta lagu jiro marxaladaha ugu horreeya ee koritaanka uurjiifka, marka ilmuhu uu weli ku jiro ilmo hooyadiis. Aan la yaabin, maya? Wax walwal ah ma ahan, xaaladdani waa mid wanaagsan. Waxaa haboon, mararka qaarkood waxaa dhacda in uu ku dhaco laakiin daaweynta antibiyootigga ayaa si dhakhso ah uga gudbi kara. Haddii dhibaatadani inta badan soo baxdo, qaliinka ayaa ka saari kara daloolka sida aan jirin. Calaamadaha infakshanka ku dhaca bukaanka meel u dhow kilyaha ayaa ah:
- bararka degaanka
- jiritaanka guduudasho
- xanuun badan ama yar
- socodka dareeraha
Calaamadaha hiddesidaha hiddesid
Xaqiiqdii waa malmo halis ah. Inta badan, waxay ka timaaddaa hiddaha la xidhiidha dhaxalka. Dhibaatooyinkaas badiyaa waxay ku yaalaan dhegta hortooda, waana cidhibta gogol-xaarood ee awoowayaasheenna leh. Aragtidani weli wali lama samaynin cilmi-baaris, laakiin waa caqiido caan ah oo caan ah. Sida laga soo xigtay aragtida Schubin saynisyahanka, joogitaanka xayawaankan u dhaw dhagaha ayaa noqon doona sababaha ugu horreeya iyo kan labaad ee farsamada. Waa qaab-dhismeedka dhammaan xayawaanada oo dhan laga dhiso inta lagu jiro horumarka embriyaha. Xaalad naadir ah oo aan abuuri kareynin mashaariic ka badan qiyaasta. Tani waxay tusinaysaa inaan dhamaanteen la soconno mararka qaarkood isbedelada isirka ah. Tani waxay ku saleysneyn xeeldheer la'aanta "xeeldheer" oo kaliya waxay ku saabsan tahay 1% midnimada reer galbeedka.
Daaweynta sanka ka hor
Guud ahaan, xaaladdaan uma baahna wax daaweyn ah. Laakiin haddii uu ku dhaco caabuq, maamulka antibiyootikada iyo dheecaan malax ayaa lagama maarmaan u ah in la nadiifiyo godadka hore ee auricular. Marka laga hadlayo infakshanka soo noqnoqda, waxaa lagula talin doonaa in laguugu yeero qalliin si looga saaro nudleus iyo habka subcutaneous.
Shan barnaamijyo ah oo loogu talagalay daawashada online - Talooyin